सीमांकन र नामांकन सहितको संविधान जारी गर्ने कुरा बिमलेन्द्र निधि देखि बाबुराम भट्टराई सम्मले भनेका छन। सीमांकन का लागि आयोग गठन पनि भएको छैन। नामांकन का लगी प्रदेश सभा गठन भएको छैन। भने पछि अहिले समय छ त। जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ? १५० दिन किन नदिने? आखिर जनता जनार्दन हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति का लागि दुई तिहाई भएको बेलामा नराख्ने किन?